बझाङ। सानो टिनले छापेको झुप्रो, त्यही झुप्रोमा दुई छोरा, दुई छोरी, एक सासूआमासहित रामपुर नगरपालिका– ५ बाङ्गे पसल बस्ने जमुना नेपालीले मजदूरी गरेर जीवन गुजारा चलाउँदै आएकी छन् । छ जनाको
युएई, अप्रिल ३०- युएईको लिडिङ एक्सचेञ्ज कम्पनी युएई एक्सचेञ्जले आफना ग्राहकहरुलाई लक्ष्यित गरेर आकर्षक समर योजना सार्वजनिक गरेको छ ।युएईमा आकर्षक घर, ३ वटा कारहरु र दैनिक १० हजार दिराम
मलेसियामा पहिलो पटक सयुक्त कार्यक्रम , राजदुत पाण्डेको भव्य स्वागत
मलेसिया ।मलेसियामा रहेका विभिन्न क्रियाशील सामाजिक संघ संस्थाहरुलेको सयुक्त रुपमा आईतबार कार्यक्रम आयोजना गरि मलेसियाका लागि नव नियुक्त महामहिम राजदुत उदयराज पाण्डेको भब्य स्वागत गरेका छन । उक्त कार्यक्रममा मलेसियामा
राजदूत पाण्डेको स्वागत मलेसियामा भब्य तयारी हुदै
क्वालालम्पुर१३ चैत्र । मलेसियामा क्रियाशील नेपाली सङ्घसं स्थाहरु सँगको समन्वय र सहकार्यमा यहि मार्च ३१तारिख मलेसियाका लागि नबनियुक्त राजदूत उदयराज पाण्डेलाई स्वागत गने कार्यक्रम तय गरिएको छ । नेपाली ब्याबसायी
भारतले आक्रमण गरे पाकिस्तानले त्यसको जवाफ दिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं, फागुन ७ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरे आफूले पनि त्यसको जवाफ दिने चेतावनि दिनुभएको छ । भारत काश्मिरको पुलवामामा गत १४ फरवरीका दिन भएको आतकंकारी आक्रमणको
दमक । झापाको बेलडाँगी स्थित शरणार्थी शिबिरका केही दिन अघि भएको आगलागि पीडितहरुलाई आज एक कार्यक्रमका बीच राहत रकम बितरण गरिएको छ । माघ १३ गते आईतबार बेलडाँगी–२ को सेक्टर
दुइपक्षिय झडपमा जम्मू कास्मिरमा ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, फागुन ६ । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरको पुलवामा विद्रोहीसँग भएको झडपमा चार जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ । सेनाले विद्रोहीको अखडामा आक्रमण गर्दा दुई जना विद्रोही पनि मारिएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन ४ । घरपालुवा जनावरले व्यक्तिको जीवनमा मानिसको भूमिका निभाउन त सक्दैन । तर न्यूयोर्कको क्लार्कसन युनिभर्सिटीमा पढ्ने शारीरिक रुपमा अशक्त २५ वर्षीया युवती ब्रिटनी होलेको ग्रिफेन नाम गरेको
अमेरिकाको ईलिनोयमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, फागुन ४ । अमेरिकाको ईलिनोय राज्यमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले तत्काल गरेको जवाफी कारबाहीमा परी आक्रमणकारीको मृत्यु भएको छ । ५ जना
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मादुरोको चेतावनीको खण्डन गर्दै विपक्षी नेता गुवाइदो
काठमाडौं, २२ माघ । भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुँवा गुवाइदोले देशमा गृहयुद्ध निम्तिने राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको चेतावनीलाई खण्डन गर्नुभएको छ । गुवाइदोले गृहयुद्धको कल्पना गर्नु हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै मादुरोको चेतावनी
जनकपुरमा ८ वटा सिलिण्डर विस्फोट, तीन
जहाजमा आगो दन्किदा रमिते बने मन्त्री
डा. पति पत्नीबीच दाइजो काण्ड :
गोताखोरले पनि भेटेन कर्णालीमा बेपत्ता जीप
सावधान युवती ! काठमाडौंमा बाटोमा हिडिरहेको